Kamshaa saagi irraa
Iddoon kun galmee ammaa keessatti, wabiiwwan yk dirreewwan wabeefamanitti isa saagduudha. Wabiiwaanii, galmee walfakkataan yk galmeewwan xiqqaa galmee guddaa tokko keessatti dirreewwan wabeefamaniidha.
Bu'aan akka dirreetti waabeffannaa galchuu, yeroo galmee hundaa jijjiirtu, hujeekaan wabiiwwan qindeessuun sinbarbaachisu. Amma, F9 dhaan dirree yoo haroomsittee, akkasuumas wabiiwwan galmee keessaas siif haroomu.
Qubaannoo qaree ammaa galmee keessattti dirree filataame saaga. Qaaqa cufuuf, qabduu Cufi jedhu cuqaasi.
Title is: Dirreewwan